Nambara i Xiaomi Mi Band 4C: Tarika fanatanjahan-tena vaovao miaraka amin'ny fizakan-tena 14 andro | Androidsis
Xiaomi dia nanambara smartband fanatanjahan-tena vaovao misy eo anelanelan'ny Mi Band 4 sy Mi Band 5, tarika roa efa amidy, ny farany tsy maintsy miantsona any Eropa. Nanapa-kevitra ny mpanamboatra finday mamoaka fanavaozana izany dia hahatonga anao hivarotra singa marobe amin'ity modely tonga any Hong Kong ity.
Xiaomi Mi Band 4C Hanampy antsika amin'ny fotoana rehetra hahalala ny ora izany, hanara-maso ny fampisehoana fanatanjahantena rehetra azonao atao, ankoatry ny zavatra hafa. Toy ny hoe tsy ampy izany, tonga ity vokatra vaovao ity hisambotra ny tsena ary hamirapiratra noho ny fizakan-tenany lehibe, tokony ho tapa-bolana hoy ny mpanamboatra.
1 Xiaomi Mi Band 4C, ny zava-drehetra momba ity tarika vaovao ity
Xiaomi Mi Band 4C, ny zava-drehetra momba ity tarika vaovao ity
La vaovao Xiaomi Mi Band 4C tonga miaraka a 1,08 santimetatra tontonana Ny karazana TFT-LCD misy vahaolana 128 x 220 teboka ary ny hazavan'ny efijery dia 200 nits. Ny famolavolana ny efijery dia mitovy amin'ny an'ny Mi Band hafa, fisaka sy somary fomban'ilay mpanamboatra sinoa fanta-daza izy io.
Mi Band 4C dia mirakitra fomba fanatanjahantena dimyAnisan'izany ny mandeha an-tongotra, mandeha bisikileta, mihazakazaka, mampiofana maimaim-poana ary ao koa ny treadmill. Ho fanampin'izay, ny tarika Xiaomi dia manara-maso ny kalitaon'ny torimaso ary misy fanaraha-maso fo izay mamela azy hajanona amin'ny fomba mitohy.
Ny Xiaomi Mi Band 4C dia miakatra amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo manala ny faran'ny tady iray, tena mitovy amin'ny fomba ampiasain'ny mpanamboatra hafa ary manana fizakan-tena 14 andro. Azonao atao ny mandray fampandrenesana tonga amin'ny telefaoninao, hafatra SMS, antso, fanaraha-maso playback mozika ary fanoherana rano 5 ATM.
SCREEN 1.08 inch TFT-LCD misy vahaolana 128 x 220 pixel
BATERA 130 mAh miaraka amin'ny fampiasana tsy tapaka ny 14 andro
entana USB natsangana tao anaty fehin-tànana - adiny 2 ho an'ny fiampangana feno
FOMBA FIVORIANA Fandrefesana torimaso - Fandrefesana hetsika - Fomba fanatanjahan-tena isan-karazany - Fampandrenesana
fehin-kibo Silikona azo ovaina
COLORS: Mena - Maitso - Manga - Mainty
CONNECTIVITYBluetooth 5.0 BLE
PRICE: 18 euro hanovana
La vaovao Xiaomi Mi Band 4C Tonga amin'ny loko efatra misy izy: Green, mena, fotsy ary mainty amin'ny vidiny 159 Hong Kong izay mitovy amin'ny 18 Euro eo ho eo. Ny fandefasana azy any amin'ny firenen-kafa dia tsy fantatra, mety hanova ny anarany aza izy io mba ho tonga.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Nambara i Xiaomi Mi Band 4C: Tarika fanatanjahantena vaovao miaraka amin'ny fizakan-tena 14 andro
Izany no mety ho endrik'i Huawei's Galaxy Z Flip
Ny sary marobe an'ny Samsung Galaxy Note 20 Ultra dia tafaporitsaka